Astaamaha iyo noocyada nidaamka deegaanka | Cusbooneysiinta Cagaaran
Astaamaha iyo noocyada nidaamka deegaanka
Xaqiiqdii waligaa waad maqashay nidaamka deegaanka. Waxay u egtahay bey'ad-saaxiibtinimo ama bey'ada / cilmiga bey'ada, laakiin maahan. Nidaamka bey'aduhu waa jawi dabiici ah oo isku dhafan oo qayb ka ah deegaanka isla markaana ka kooban nolosha iyo noolaha aan noolayn. Nooc kasta oo nidaamka deegaanka ah wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah oo ka duwan inta kale ee siiya sharaf gaar ah. Nidaamyada deegaanka oo dhami waxay sii ahaanayaan kuwo firfircoon oo "caafimaad qaba" ilaa iyo inta dheelitirka bey'adda la ilaalinayo
Fikradahani waxay kuguula ekaan karaan Shiinaha. Si kastaba ha noqotee, haddii aad sii wadato akhrinta boostada, waxaan kugula socodsiin doonnaa waxaas oo dhan si fudud, fudud oo madadaalo leh. Ma rabtaa inaad wax badan ka barato nidaamka deegaanka iyo noocyada jira?
1 Qeexida nidaamka deegaanka
2 Muuqaalka deegaanka
3 Noocyada nidaamka deegaanka
3.1 Nidaamka deegaanka
3.2 Nidaamyada deegaanka ee dabiiciga ah
3.3 Dhul ahaan
3.4 Biyo macaan
3.7 Ee Buurta
Qeexida nidaamka deegaanka
Dhammaan qaybaha ka tirsan nidaamka deegaanka waxay leeyihiin isku dheelitirnaan dhammaystiran oo ka dhalanaysa isafgarad. Noolayaasha iyo noolaha labadaba waxay leeyihiin waxqabad mana jiraan wax aan "u adeegeyn" deegaan dabiici ah. Waxaa laga yaabaa inaan u maleyno in noocyada qaarkood ee cayayaanka xanaaqa ay yihiin "kuwo aan waxtar lahayn". Si kastaba ha noqotee, nooc kasta oo jira wuxuu door bidaa firfircoonida iyo shaqada deegaanka.
Intaas waxaa sii dheer, intaas oo keliya maahan, laakiin waa isu-dheellitirka noolaha iyo kuwa aan noolayn ayaa ka dhiga meeraha Dunida sida aan maanta ku naqaan. Sayniska ayaa mas'uul ka ah barashada dhammaan dhinacyada ka kooban nidaamka deegaanka, ha ahaadeen kuwo dabiici ah ama kuwo dad ah. Maaddaama bina-aadamku gumeystay inta badan dhulka, waa isbeddel aasaasi ah oo lagu soo bandhigo barashada nidaamka deegaanka.
Sidii aan horeyba u soo sheegnay, waxaa jira noocyo kala duwan oo nidaamka deegaanka ah oo ku kala duwan labadaba asal ahaan sida noocyada sagxadaha iyo noocyada ku jira. Dhinac kasta oo kala duwan ayaa ka dhigaya mid gaar ah oo gaar ah. Waxaan ka heli karnaa dhul, badeed, bey'adaha dhulka hoostiisa ku nool iyo noocyo fara badan oo aan dhammaad lahayn.
Nooc kasta oo deegaanka ka mid ah, noocyada qaarkood ayaa u badan kuwa leh guulo horumarineed oo ballaadhan iyo in, sidaa darteed, ay si fiican u kantaroolaan habka ay u noolaadaan una ballaadhiyaan tira ahaan iyo dhul ahaanba.
Sida laga dheehan karo isku-dhafka Dhulka, nidaamyada deegaanku badankood waa biyo, maaddaama meerahu ka kooban yahay 3/4 qaybood oo biyo ah. Weli, waxaa jira noocyo kale oo badan oo deegaanka deegaanka ah oo leh noocyo badan. Qaar badan oo ka mid ah noocyada noolaha deegaanka ayaa dadku yaqaan, maaddaama ayan aad uga fogayn xarumaha magaalooyinka.
Aadamuhu wuxuu isku dayay inuu gumaysto dhammaan dhulal suurtagal ah sidaas darteed, waxay xaalufisay bay'ad dabiici ah oo aan tiro lahayn. Waxaa laga yaabaa inay adkaato dhul bikro ah oo ka harsan meeraha oo dhan. Waxaan sameynay calaamado.
Nidaamka deegaanka wuxuu ku arkaa laba arrimood oo aasaasi ah oo ay tahay inaan tixgelinno. Kuwa hore waa arrimo abiotic. Sida magacooda ka muuqata, iyagu waa nidaamyada deegaanka ee aan nolol lahayn oo ka dhigaya dhammaan cilaaqaadka kaamil ah nidaamka deegaanka. Anagoo ah sababo abiotic ah waxaan ka heli karnaa cilmiga dhulka iyo muuqaalka dhulka, nooca carrada, biyaha iyo cimilada.
Dhanka kale, waan helnaa arrimaha noolaha. Kuwani waa qaybaha nolosha leh sida ay yihiin noocyada kala duwan ee dhirta, xayawaanka, bakteeriyada, fungi, fayrasyada iyo borotokoolka. Arrimahan oo dhami way isku xidhan yihiin iyadoo loo eegayo waxa deegaanku u baahan yahay iyo waxa ugu fiican si ay noloshu u sii dheeraato malaayiin sano. Tani waa waxa loo yaqaan isu-dheellitirka deegaanka. Isku xirnaanta ka dhexeysa qayb kasta, ha ahaato abiotic ama biotic, nidaamka deegaanka ayaa isu dheellitiran si wax walbana ay u wada jaanqaadaan (eeg Waa maxay biome?)
Haddii dheelitirka deegaanka ee nidaamka deegaanka uu jabo, wuxuu waayi doonaa astaamahiisa oo waxaa hubaal ah inuu hoos u dhici doono. Tusaale ahaan, iyada oo loo marayo wasakheynta.
Noocyada nidaamka deegaanka
Hadda waxaan sharaxeynaa noocyada kala duwan ee nidaamka deegaanka.
Iyagu waa waxa dabeecadda soo saartay kumanaan sano. Waxay leeyihiin dhul ballaaran tan iyo labaduba waa dhul iyo biyo. Nidaamyadan deegaanka kuma xisaabtameyno gacanta nin, sidaas darteed waxaan uga tageynaa isbadalkooda macmalka ah ee noocyada kale ee deegaanka.
Nidaamyada deegaanka ee dabiiciga ah
Kuwani waa waxa laga abuuray dhaqdhaqaaqyada aadanaha. Kuwani waa meelahaas oo aan lahayn dusha ay abuurtay dabeecadda lafteeda iyo in, si ballaaran, loo abuuray in lagu gaaro faa'iidooyinka silsiladaha cuntada. Waxqabadka bini'aadamku wuxuu dhaawacaa nidaamyada deegaanka ee dabiiciga ah iyo, sidaa darteed, isku day ayaa la sameeyay si loo soo celiyo si dheelitirka deegaanka ee la magacaabay dib loogu soo celiyo kahor intaan laga fursan.
Ma kuwa ay ku jiraan biocenosis ayaa la sameeyaa oo wuxuu ku kobcayaa oo kaliya ciida iyo dhulka hoostiisa. Dhammaan astaamaha deegaanadani waxay leeyihiin waxyaabo badan oo ku tiirsan oo ku tiirsan sida huurka, joogga, heerkulka iyo loolka.
Waxaan helnaa hawdka, qalalan, dhul-beereed iyo kaymo daaq ah. Waxaan sidoo kale leenahay deegaanno lamadegaan ah.
Waa kuwan dhammaan meelaha ay ku yaalliin harooyinka iyo wabiyada. Waxaan sidoo kale xisaabta ku darsan karnaa meelaha aan ku leenahay leyliyo iyo lentic. Kuwii hore waa kuwa durdurrada ama ilaha biyaha ah ee lagu samaynayo deegaan yar oo ay ugu mahadnaqayso hadda jira ee aan tooska ahayn.
Dhinaca kale, kuwa lentiga ahi waa goobo biyo macaan ah oo aan lahayn biyo mareenno. Waxaa sidoo kale loogu yeeri karaa biyaha fadhiya.
Nidaamka deegaanka ee badda ayaa ah kuwa ugu badan ee Dunida. Tan waxaa u sabab ah dhammaan noolaha ku nool meerahan waxay bilaabeen inay ku horumariyaan badda. Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah noocyada ugu xasiloon ee nidaamka deegaanka sababtoo ah xiriirka weyn ee ka dhexeeya dhammaan qaybaha ka kooban. Intaas waxaa sii dheer, booska ay ku fadhido aad ayuu u weyn yahay oo waxaa waxyeelleeya gacmaha aadanaha.
Xitaa sidaas oo ay tahay, badaha iyo badaha adduunka oo dhan waxaa ku dhaca ficillo daran oo qofka bani'aadamka ah oo leh saameyn taban sida wasakheynta biyaha, dheecaannada sunta ah, biliijka dhuxusha, iwm.
Saxaraha lamadegaanka, roobku aad ayuu u hooseeyaa. Maaddaama aysan jirin wax biyo ah, dhirta iyo duudduubku aad ayey u yar yihiin. Noolaha ku nool goobahan aan loo dulqaadan karin waxay leeyihiin awood weyn oo la-qabsi iyo badbaadin iyadoo lala kulmayo xaalado deegaan oo aan fiicnayn. Xidhiidhka ka dhexeeya noocyada xayawaanku ma jabaan. Si kastaba ha noqotee, haddii wax ka dhex dhacaan mid ka mid ah noocyada ka kooban silsiladda cuntada, waxaan la kulmi doonnaa dhibaatooyin daran dhammaan dheelitirka noocyada.
Haddii hal nooc uu yareeyo dadkiisa waxaan sababi doonnaa musiibooyin kuwa kale. Lama-degaanku waa nidaam deegaan oo aad u nugul sababo la xiriira deegaankooda oo aad u qalalan iyo farqiga weyn ee u dhexeeya heer kulka inta u dhexeysa habeen iyo maalin.
Nidaamyadan deegaanka waxaynu ka helaynaa gargaar sare oo, xaalado badan, aad u foogan. Meelahan dhaadheer, dhirta iyo xayawaanku si wanaagsan uma horumarin karaan. Kala duwanaanshaha nooleyaasha ayaa hoos u dhacaya markii aan kor u qaadno sare. Buurta hoosteeda waxaa ku yaal noocyo badan waxayna la falgalaan deegaanka ku xeeran. Si kastaba ha noqotee, markii aan kor u qaadno sare, noocyada ayaa sii yaraanaya. Waxaan helnaa xayawaan sida yeey, chamois iyo shimbiraha ugaadha sida gorgorka iyo gorgorrada.
Kuwani waxay leeyihiin cufnaan geed oo aad u tiro badan iyo dhir iyo dhirba. Waxaa jira qaar ka mid ah nidaamyada deegaanka sida hawdka, keynta dhexdhexaadka ah, taiga iyo keynta qallalan. Guud ahaan, huurka, roobka iyo cufnaanta geedku waxay u janjeeraan koritaanka xoolaha.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto nidaamka deegaanka iyo astaamahiisa oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Ecology » Astaamaha iyo noocyada nidaamka deegaanka
Waa maxay tamar?
Waxtarka tamarta ee dhismayaasha